Kufunga pfungwa 101: Kufungisisa Mazano | Martech Zone
Kufungisisa 101: Kufunga kwepfungwa
Mugovera, March 30, 2013 Mugovera, March 30, 2013 Douglas Karr
Isu tichangobva kusaina iyo yepamhepo vhezheni ye Mindjet, mutengi wedu uye anotsigira tekinoroji paMartech. Ivo vane 25% yabviswa yakakosha kumhanya mukati mevhiki! Ini ndiri mutsva mukufunga uye ndakawana inonakidza mindmap yakagovaniswa Mepu dzeIcho chinoratidza misimboti yeMindmapping.
Chandinonyanya kufarira nezve kufunga kwepfungwa ndechekuti ini ndinogona nekukurumidza kuronga pfungwa dzangu nenzira yepamusoro kusvika padanho rekupedzisira reruzivo. Iyi mindmap inofamba nepakati nei vanhu vachishandisa mindmaps uye kuti vanobatsira sei kune vese kuruboshwe uye kurudyi uropi hwepfungwa, maitiro ekutanga kugadzira yako mindmap uye mashandisiro ekushandisa maturusi ese kusiyanisa rimwe nerimwe rematavi, misoro, subtopics uye zviito. Mindjet inokutendera iwe ku hyperlink matavi, kuwedzera mabasa, pamwe nekugovana pamwe nekubatana nenhengo dzeboka.
Mukati mekuedza kwedu kushambadzira, isu tashandisa pfungwa dzekufunga, isa hurukuro yekutsvaga, kuronga zvirongwa, kugadzira zvigadzirwa zve software, uye kunyora mashandiro anoita bhizinesi redu rese. Icho chaicho chinodhakwa tekinoroji - kuchengetedza nguva uye kugadzira mamapu ayo anotsanangudza zvakajeka uye zvakachena zvirongwa zvako kana maitiro.
Heano anokurumidza mavhidhiyo ekuti vanhu vari kushandisa sei Mindjet kugadzira mindmaps:
Tags: maitiro ekufungaMindjetmind mapkufunga pfungwakufunga mazano